Kukwira Landlady wemaZigaro mahombe! – VanodaZvinhu
by DrSviro · January 5, 2016
Mumwe musi vakazouya padoor pangu vakati nhai unogona kundisirawo plug pastove vaive vakamonerera towel raiburitsa line repakati pemazamu richisvikogumira panoperera magaro rekuti vakakotama raitozoburitsa beche chete.
Ndakanyarara zvangu ndikanogadzira stove iya. Zuva rakazotevera vakanditi ndiuye kuzovaisirawo light mubedroom mavo ipapo ndakambotya nechemumwoyo ndikati zvino mubedroom ko murume anoti ukutsvageo akasvika. Ndakangozvishingisa pandakapinda ndakashamisika ndichiona ziibra ravo nepant zviripasi chaipo ivo vakangoti enda unoriisa ndakumbonogeza, ndakariisa ndikadzokera hangu mumba mangu. Vakazonditi rimwe zuva music yaunoterera inonakidza saka ndichauya wozondiisirawo kamufone nepadisc ndakavati munogona kundipa henyu ndonokuisirai vakati ndichauya ndozonyatsosarudza yandinoda.
Saka ndakazoti rimwe zuva manheru vakanoka door ndakarara ndikavhura ndikaona vakapfeka towel vakati ndauya kuzoisirwa music. Baba vevana havapo saka ukandipa music ndikawana chekuteerera ndikatovaraidzwa nekuti vaenda kubusiness trip for three days. Ndakagara pachair ivo vakagara yaiva padhuze vakaswedera pedyo zvekuti vaitondiguma ruoka nemazamu vakazosimukira vakaisa ruoka rwavo kuseri kwechair yangu zvino zamu ravo rave pashoulder pangu vachitiridza imwe song. Iniwo semunhu aitova atomisa uye achitya sezvo ndakange ndisati ndatombokwira musikana ndakaramba ndakanyarara
Hameno kuti towel ravo vakange vakarisunga seyi rikadonha pamazamu vakabva vatotanga kundikisa vasina chavataura. Ini ndakatanga kuvakisawo vakavhura zipi yangu vakadonhedza towel ravo ndakatotanga kutunda ndabatwa mboro ndakazovasvira amai ava vakazondiyamwa mboro ndakanakirwa zvegore rese nekuti yaive first time yangu kusvira.
Ndakazotama pamba last month nekuti ndakazoona kuti zvaikwanisa kuzondinetsa asi ikozvino ndirikutsvaga mumwe musikana anematako mahombe kudaro.Zvavekunakidza zvekusvira izvi.
Short Story: Ndakazorisvira bhebhi rekuDhorobhha ndichangobva kumusha!
by DrSviro · Published August 5, 2015
by DrSviro · Published November 6, 2015
by DrSviro · Published August 14, 2013
Let’s hope hauna kuvanhumburisa zvechirwere hatitaure coz now it’s common kuva HIV+